Umhlangano Wamaqembu E-Microsoft usuzokuthola okuningi kwe-Cinematic - Ukuqhathanisa 2022
Umhlangano wamaQembu eMicrosoft usuzothola i-cinematic eyengeziwe
Izifundiswa | 0 Amazwana
Isikhathi Esizayo - Isikhathi sonyaka 9
Ividiyo ye-Amazon Prime (Ividiyo efunwayo); U-Laura Caballero (Umqondisi)
I-Microsoft isebenzela ukuvuselela isofthiwe yayo yenkomfa ngevidiyo ezovumela izinhlangano ezinamadivaysi ahambisanayo ukuthi zisebenzise amakhamera amaningi kumaQembu e-Microsoft.
Nokho, kunenkinga, njengoba lesi sici esisha esinamakhamera amaningi sizosebenza kuphela kumadivayisi athile e-Microsoft Teams Rooms.
Kulabo abangayijwayele, I-Microsoft Teams Rooms iyi-hardware yenkomfa yevidiyo ezinikele kanye nesixazululo sesofthiwe esasibizwa ngokuthi i-Skype Rooms. Amadivayisi e-Microsoft Teams Rooms ahlanganisa amahedisethi eQembu, izipikha, izibonisi, amafoni edeski, amabha okuhlanganyela, amakhamera ewebhu, nokunye.
Ngokwe-athikili entsha kumephu womgwaqo we-Microsoft 365, lesi sici sisathuthukiswa futhi kulindeleke ukuthi sikhishwe kumadivayisi e-Microsoft Teams Rooms afana ne-Surface Hub 2S ngoJanuwari wonyaka ozayo.
Shintsha phakathi kwamakhamera amaningi
Uma lesi sici esisha sesitholakala, izinhlangano ezinomhlangano noma igumbi lenkomfa elinamakhamera evidiyo amaningi axhunywe kumagumbi e-Microsoft Teams zizokwazi ukushintsha phakathi kwawo phakathi nocingo lwevidiyo.
Ukuze benze lokhu, bazodinga ukuchofoza isithonjana somcibisholo oweqa unxande ngaphansi komhlangano Wamaqembu ukuze babone uhlu lwamakhamera atholakalayo. Ukusuka lapho, bangashintsha kalula amakhamera ngaphandle kokuphazamisa umhlangano wabo.
Njengoba amadivaysi amaningi anamakhamera akhelwe ngaphakathi, lesi sibuyekezo esisha ku-Microsoft Teams Rooms sizovumela izinhlangano ukuthi siwasebenzise ngokunenzuzo. Ezinye izimo ezingase zisetshenziswe zihlanganisa ikhono lokushintsha phakathi kwesithombe seqembu elikhulu nomuntu ophambi kwekhamera, kanye nekhono lokunikeza abahambele umcimbi umbono oseduze womkhiqizo noma idizayini.
Manje njengoba iMicrosoft yengeza ukusekelwa kwamakhamera amaningi emakamelweni e-Microsoft Teams, inkampani ingase yengeze lokhu kusebenza okufanayo emihlanganweni evamile yamaQembu ukuze abantu bakwazi ukunikeza imihlangano yabo umuzwa wesinema kakhudlwana.
Uyafuna ukuthuthukisa amakholi akho evidiyo? Bheka ukuhlanganiswa kwethu kwesofthiwe engcono kakhulu yenkomfa ngevidiyo, amakhamera ewebhu angcono kakhulu, namahedisethi okushaya enkomfa angcono kakhulu.